Shirkadda Shiinaha ee loo yaqaan 'Readymade Roller Blinds Exporters' iyo Shirkadda | ETEX
Indhoolayaasha Dharka Dharka ayaa noqday kuwa ugu caansan adduunka hadda oo loogu talagalay qurxinta daaqadda. Ka faa'iidayso hawlgallada fudud, qaab fudud, xulashada dharka aan dhammaadka lahayn. Dadku waxay doortaan Roller indhooleyaal aad u badan oo loogu talagalay qurxinta. Indhooleha curyaamiinta Readymade waxay bixiyaan taxane dhammaystiran oo ka kooban qaybaha iyo dharka, macaamiisha way furi kartaa oo waxay ku dhejin kartaa DIY. Way fududahay in la rakibo oo fududaato in la beddelo.
Indhooleyaasha 'Roller blind' waa kuwo la awoodi karo, oo si wax ku ool ah oo daaqad indho indheyn indhoole ah oo caado ah oo casri ah.
indhooleyaasha roller ayaa kuu oggolaanaya inaad abuurto saxda ah niyadda saxda ah iyo jawiga aad ugu baahan tahay gurigaaga si dhakhso leh
Indhoolayaasha wax loo yaqaan 'roller Blinds' waxay si fiican ugu habboon yihiin daaqad kasta, oo waxay kuu soo bandhigaan qaab quruxsan, qaab casri ah qurxintaada.
Indhoolayaasha wax lagu xiro ayaa ku soo bandhigaya noocyo gaar ah oo ah dharka xakamaynta qorraxda oo ay ku jiraan mugdiga, translucent, iyo sunscreen.
Waxaad sidoo kale lahaan kartaa kantarool buuxa oo leh indhoole labalaab ah oo si fudud uga beddeli kara translucent, ama muraayadaha qoraxda oo aad u madoobaato waqti kasta, adoo sii joogaya guri raaxo leh sanadka oo dhan. Aaladda qalalaasaha ayaa lagu rakibay dhammaan kontaroolada silsiladaha si loo hubiyo nabadgelyada cunuggaaga.
Jilaayaha ayaa indhatiraya Isticmaalka:
Si balaadhan looga isticmaalo Kafee, Dugsi, Guri, Meel wadareed, dukaanno, abaar, isbitaal iyo dhammaan meelaha kale ee la wadaago. Indhooleyaashu waxay indha indheeyaan labadaba waxay isticmaalaan gudaha ama bannaanka. Iyada oo ku saleysan doorashada aan dhammaadka lahayn ee waxyaalaha indha la 'iyo nidaamyada.
Noocyada indha indheeyeyaasha Nooca:
Gacanta Ku Shaqeeyaha Roller indha la '
Laba Dhagax Oo Indho La '
Indhooleyaasha Madoowga Madow
17mm Mini Roller Blind oo loogu talagalay qurxinta daaqadda
Dharka Waxyaabaha, 100% polyester ah
Daboolida lakabka acrylic
Degdeg Fudud> Australia Fasalka 4.5
Tuubada Qalabka Aluminium aluminium 17/25/28/32/35/38 / 40mm
Alloum Aluminium Alloumum hoosta, qaab siman / qaab arc / qaab wareegsan
Nidaamka Howlgalka Nidaamka Xargaha Cord string / silsilad balaastig ah / silsilad bir ah / xakameeyaha fog
Habka Howlgalka Midig / Bidix
Waxaa loo adeegsaday Qolka jiifka, Hoteelka, Balakoonka, Qolka fadhi, Hoteelka, Xafiis iwm.
Style Casriga ah oo fudud
Xaraashka Hawsha, kuleylka kuleylka
Xiga: Dharka daahyada / Roman